ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF ကျောင်းသူ ရဲမေဟောင်း နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းခရီး(၂၅)
ABSDF ကျောင်းသူ ရဲမေဟောင်း နန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းခရီး(၂၅)
by May Thingyan Hein on Wednesday, January 9, 2013 at 4:09am ·
ဇန်န၀ါရီလ ၉၊ ၂၀၁၃ ရန်ကုန်မြို့။
အဲဒီ ဋ္ဌာနလေးမှာ အလုပ်သမလေးဘ၀နဲ့ အလုပ်လုပ်နေရင်း ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ တနှစ်လောက် ကာလမှာတော့ ကျမနဲ့ အဲဒီဋ္ဌာနက boss နဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်။ ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်း ကျမက စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲနဲ့ ဒေါသထွက်ပြီး ပေါက်ကွဲလို့ ဖြစ်ရတာ။ ကျမက ၀ုန်းဒိုင်းကျဲပစ်လိုက်တာ အဲလိုမျိုးတွေပေါ့။
ဒါတွေကလည်း ဒီတောထဲမှာ ဒီလိုဖမ်းခံရပြီး နှိပ်စက်ခံရတာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျမ စိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ဒေါသနဲ့ပေါက်ကွဲမှုက အရမ်းမြန်တယ်။
အဲဒါကြောင့် မေမေတို့ အစ်တို့အားလုံးက ကျမ မိသားစုက ကျမကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ကြည့်နေကြတာ ခုချိန်ထိပဲ။ ပေါက်ကွဲပြီးရင် ကျမက အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ခံစားချက်တွေကို မထိန်းနိုင်ဘဲနဲ့ ဖြစ်နေတာ မကောင်းဘူးပေါ့နော်။
အဲလို မန်နေဂျာနဲ့ ပြဿနာတက်တော့ကျမ အလုပ်ဆက်လုပ်ရတာ မပျော်တော့ဘူး၊ အဲဒါနဲ့ အလုပ်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားရတယ်။ နောက်ထပ်အလုပ်တခုကို ရှာရပြန်ရော။
ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောမလား၊ အခုချိ်န်ထိ လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရတယ်။ အဲဒီအလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျမလက်ရှိ အလုပ်မှာက၁၉၉၅ ကတည်းက စလုပ်ခဲ့တာပဲလေ၊ ခုတော့ ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။
ဒီကြားထဲမှာ Australia မှာလည်း စီးပွားရေးကျဆင်းတာတွေ ဘာတွေရှိတယ်၊ အလုပ်ရုံတွေ စက်ရုံတွေက အလုပ်သမားတွေ လျော့ပစ်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ မပါခဲ့ဘူး။ ကျမတို့ ဋ္ဌာနတခုလုံး ဖြုတ်ခံရတာတွေ ရှိပေမဲ့ ကျမက အမြဲ ကျန်ခဲ့တယ်၊ အလုပ်ရှင်ကလည်း သဘောကျတယ်၊ မန်နေဂျာတွေကလည်း ကြိုးစားတယ်၊ အလုပ်ကိုလေးစားတယ် ဆိုပြီး သဘောကျတဲ့အတွက် အခု ဒီအလုပ်မှာ ၁၈ နှစ်ရှိပြီ ရာထူးလည်း တက်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ကံလည်းပါပါတယ်။
နောက် ကျမက ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်နားလည်တယ်။ ရတဲ့ အလုပ်ကလေးကို အရမ်းကြိုးစားပြီး လုပ်တယ်။ ကျောင်းလည်း သွားမတက်ဖူး သိလား။ အလုပ်က ကျောင်းတက်ဖို့လည်း ခွင့်ပြုတယ် ဒါပေမဲ့ ကျမက ကျောင်းစာဆိုရင် ထွက်ပြေးတဲ့ လူတယောက်၊ အလုပ်က ခွင့်ပြုရင်လည်း အလုပ်တဖက်နဲ့ ကျောင်းတက်ဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးပဲ။
အမရဲ့ အမတွေ မိသားစုတွေကလည်း ပြောကြတယ်၊ ကျောင်းလည်းတက်ဖို့ပေါ့၊ သိတဲ့အတိုင်းပဲ အလုပ်ကိုပဲ ဖိလုပ်ခဲ့တယ်၊ ကျောင်းလည်း မတက်ခဲ့ဖူး။
အိမ်ကလည်း ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် တက်ဖို့ ထောက်ပံ့ပေးမယ်ပြောတယ်၊ သူတို့ကို မတက်ဖူးလို့ တခွန်းမပြောဘဲနဲ့ ကျောင်းမတက်ဘဲနဲ့ အလုပ်ပဲ ပေပြီး လုပ်တာ။ သိတယ်မဟုတ်လား ကျမက ပြန်မပြောနားမထောင်လေ။အဲလိုနဲ့ နေနေရင်းနဲ့ပဲ ကျမက အလုပ်ထဲမှာ မြဲနေခဲ့တယ်။
အဲဒီတုန်းက မနက်ဆိုရင် ဘုရားကိုပုံမှန်ရှစ်ခိုးဖြစ်တယ်၊ အဖွားကိုပုံမှန် ကန်တော့ဖြစ်တယ်။ အဖွားပုံကိုလည်း အကြီးကြီး ပုံကြီးချဲ့ပြီး အိမ်မှာ ချိတ်ထားတယ်။ ကျမက အဖွားကို အရမ်းချစ်တာ။ အဖေအမေထက်တောင် အဖွားကိုချစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမက အဖွားနဲ့ကြီးခဲ့တာ။ အဖွားလက်ထဲမှာ ကြီးခဲ့တာလေ။
ကျမက Australia မှာ တယောက်တည်းနေတာ၊ အဲတော့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်က အမေတို့ ဆီမှာသွားပုံလို့မရတော့ ပစ္စည်းတွေ ပေါ်မှာ သွားပုံတယ်။ လက်ပ်တော့ဆိုရင် ခဏ ခဏပျက်တယ်။ တခုခု ဒေါသဖြစ်လာရင် ပစ္စည်းတွေကို ချပစ်တာ။
နောက် ကျမက သစ္စာပြုခဲ့တယ် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သူတွေအပေါ် ကတိပြုခဲ့တော့ အမြဲတမ်း ဒါကလည်း ရင်ထဲမှာ စိတ်ထဲမှာ ရှိတယ်။ အမြဲတမ်း မဟုတ်တာတောင်မှ ဒီ မခင်ချိုဦးတို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ကိုလည်း အိပ်မက်ကို မကြာခဏမက်တာပဲ။ သူတို့ကို မက်ရင် ကျမ ဆက်အိပ်လို့မရတော့ဘူး။ တကယ်ကို ခံစားရတာနော်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမ ခံစားရတာက ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်တာလည်း ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်က ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုပြီး ခံစားရတာတွေလည်း ပါတယ်။
ကျမ အဖြစ်က အဖြစ်က အိပ်မက်ဆန်နေတယ်။ ကိုယ်ငယ်စဉ်ကဖြစ်ချင်ခဲ့တာ အမြဲစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာက ဂီတအနုပညာရှင်သမားတယောက်ဘဝ၊ အရောင်ဆိုးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားခံခဲ့ရတာက အနီရောင်နုနုလေးဘဝ၊ တကယ်လက်တွေ့ ပြုလုပ်ခဲ့တာက ABSDF-NB က တော်လှန်ရေးသမားတယောက်၊ ဒါပေမဲ့ အတင်းအဓမ္မပြုခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ကို ကိုယ်ထွက်ဆိုခဲ့ကြရတာက NIB ဒုဗိုလ် ထလရ ပါတဲ့။ ကျမရဲ့ ထလရ ကိုယ်ပိုင်နံပတ် ၁၇၅ဝ ဆိုတာကလည်း သန်းဇော်တို့ကပြောခဲ့တယ်… ငါတို့အတိအကျရထားတာတွေနဲ့အကုန်ကိုက်ညီပါသတဲ့။
ဒုက္ခပါလားနော်။ NIB က ဗိုလ်ကြီးရာထူးယူခဲ့ရသူတဦးက သူ့ကိုယ်ပိုင်နံပတ်ကိုအမြဲမှတ်မိနေအောင် ၁ဝ တန်းခုန်နံပတ်ပေးခဲ့ပါသတဲ့။ ဖြစ်အင်တွေများတော့ငိုအားထက်ရီအားသန်တာလား ၊ ရီအားထက်ဘဲငိုအားသန်ခဲ့တာလား။ကျမတို့ အယောက် ၁ဝဝ နင့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲလို ဖမ်းဆီးပြီး နှိပ်စက်တဲ့ ရက်စက်မှု့ဒဏ်တွေနဲ့ ၁၄ ဦးသေခဲ့ကြရတယ်။ ၁၆ ဦး ရက်စက်စွာခေါင်းဖြတ်သတ်တာခံခဲ့ရတယ်။ ၂ ဦးသေနပ်နဲ့ပစ်သတ်တာခံခဲ့ရတယ်။ ၅၅ ဦးထွက်ပြေးတော့ ၁ ဦးလမ်းမှာ သေဆုံးခဲ့တယ်။စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာ ၄ ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။
၉ဦးလွတ်မြောက်ပြီး ကျောင်းသားတပ်မှာပြန်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်။၉ ဦးထဲကကျမတယောက်ကတော့ KIAက ကယ်ပေးလို့ လွတ်ခဲ့တယ်။
အဲတော့ကျမက ဒီခင်ချိုဦးတို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ကို အိပ်မက် မက်တိုင်း ကိုယ်ကလည်း ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ ပိုပြီး ခံစားရတယ်။ ကျမတို့ကလည်း သူတို့ကို သမိုင်းမှန်ပေါ်ဖို့ သူတို့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်လည်း လုပ်ပေးမယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်စေရမယ်လို့ ပေးခဲ့တဲ့ ကတိတွေကလည်း ရှိနေတာကိုး။
အဲဒီအိပ်မက်အကြောင်း ကိုထွန်းအောင်ကျော် အမေကိုလည်း ပြောပြတယ်။ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အမေကလည်း ပြောတယ်။ အန်တီ အမျှပေးဝေတာထက် စာရင် သမီးတို့တွေ အမျှပေးတာကို ပိုလိုချင်တယ် ထင်တယ်တဲ့ …။ မပြောတတ်တတ်ဘူး ကျမအနေနဲ့ မပြောတတ်ဘူး။
ကျမကတော့ ဒီဖေဖော်ဝါ၇ီလ ၁၂ ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်း သတ်သတ် လွတ်စားပေးတယ်။ တခါတလေ တပတ်ပေါ့၊ တခါတလေကျရင်တော့ ၂ ပတ်ပေါ့။ အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်စုးပြီး စားပေးတယ်။
မန်လေးမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုညီညီကျော်တို့ကလည်း သူတို့ဟာသူတို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးတွေ လုပ်ကြတယ်၊ သူတို့မှာလည်း ဟိုတုန်းက အကျယ်တ၀င့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိခဲ့တာပဲ။ နောက် ရန်ကုန်မှာ ရှိကြတဲ့ ဘိုဘိုတို့ကိုရဲတို့ကလည်း သူတို့ အ၀န်းအ၀ိုင်းလေးနဲ့ သူတို့ ဆွမ်းကျွေးတာတို့ ဘာတို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးတွေ လုပ်ကြတယ်ပေါ့။ နောက် ကိုထွန်းအောင်ကျော်က သူအသတ်မခံရခင်မှာ ဘိုဘိုတို့ ကိုရဲတို့လို နီးစပ်ရာ နီးစပ်ရာတွေကို မှာခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ ဒီဘက်ကလည်း မသေရင် ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ ကတိတွေ ပေးခဲ့ကြတာတွေလည်း ရှိတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက်က အပြန်အလှန်မှာခဲ့ကြတာ၊ ကျမလည်း ကျမ သေသွားရင် ဖြစ်ရပ်မှန်ဖော်ပေးဖို့ နန်းစောကို မှာခဲ့တယ်။
သေသွားတဲ့သူတွေအတွက် ကျမတို့လုပ်ကြပါတယ် နှစ်တိုင်း ကိုယ်တတ်နိုင်ရာ ကိုယ်တတ်နိုင်ရာလေးတွေပေါ့။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ တရက်ကြတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ကျမဆီကို ဖုန်းဝင်လာတယ်။ UK မှာ ရှိနေတဲ့ ကိုထိန်လင်းက ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်၊ မငယ် ရော်နယ်အောင်နိုင် ဒီရောက်နေပြီတဲ့။ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီစဉ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်တဲ့။ သူက အဲလို ပြောပြီး ဖုန်းဆက်လာတယ်။ အမတို့ စဉ်းစားတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်ကို ဒီနေရာမှာ မလုပ်သင့်တော့ဘူးလို့။
လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီး လူသတ်ခဲ့တဲ့ သူတယောက်က လေလှိုင်းကနေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီတွေ လူ့အခွင့်ရေးတွေအကြောင်း ပြောနေတာကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့မရတော့ဘူး။ မပြောသင့်တော့ဘူး။
တခြားလူတွေ ပြောရင်ပြောကြ…ဒီလူတွေကတော့ ပြောကို မပြောနဲ့ နားခါးလှပြီ။ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်တဲ့ လူတွေက ဒီလူ့အခွင့်ရေးကို ပြည်သူတွေကို ပြောမယ်ဆိုတာ ကျမတို့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့မရဘူး။ တခြားလူတွေ ပြောပါ လူ့အခွင့်ရေးတို့ ဒီမိုကရေစီ တို့ဆိုတာ အန်ချင်စရာ စကားမဟုတ်ဘူး ကျမတို့ ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို လူမျိုးတွေတော့ လာမပြောနဲ့ ပြည်သူတွေကို ဒီလိုတွေ လာမလုပ်နဲ့ လက်မခံနိုင်တော့ဘူး။
အဲဒါနဲ့ ကျမတို့အားလုံး တိုင်ပင်ပြီး ဘီဘီစီကို ကန့်ကွက်စာတင်ခဲ့ကြတယ်။ ဘီဘီစီ မှာ ရော်နယ်အောင်နိုင်က ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တုန်းက ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွတ်စွဲပြီး လူသတ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ရေးတင်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီတုန်းကလည်း ရော်နယ်အောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်က ထောက်လှမ်းရေးဘက်ကသူလျှိုတွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ သတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ယင်ဒီးတို့ကိုလည်း သူကိုယ်တိုင် ပြောထားတာတွေရှိတော့ နေရှင်းသတင်းစာကိုလည်း ကျမတို့က တင်ပြခဲ့တယ်။
အဲဒီမှာ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဘီဘီစီကနေ နှုတ်ထွက်သွားရတယ်။ အဲဒီမှာ ကျမတို့ သိသွားတယ်။ ဟာ… လုပ်လို့ရတယ်။ သတ်ပြတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ သိမ်းထားရတဲ့ ဟာလေးက ဒီနေရာမှာ လုပ်လို့ရတာပဲ၊ ငါတို့ အမှန်တရားကို ဖော်လို့ရတာပဲ ဆိုတာ သိသွားတယ်။
ရှေ့ဆက်ငါတို့ ဘာလို့ မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ…ဒါဟာ အမှန်တရားတွေလေ။ လုပ်လို့ရတာပဲ ငါတို့ လုပ်နိုင်တာပဲ ဆိုတာကို ကျမတို့ သိသွားပြီ လက်ခံသွားပြီ။
အရင်တုန်းကတော့ ဒီကိစ္စကြီးကို အမှန်တရားပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာလည်း မသိဘူး၊ ကျမက ကတိသာပေးခဲ့ ၊ သစ္စာသာဆိုခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာမသိခဲ့ဖူး။ ဘယ်ကနေ စရမှန်းလည်း မသိခဲ့ဖူးလေ။ မစခဲ့နိုင်ဘူးလေ အဲဒီခံစားချက်က တော်တော်ခံစားရတယ်နော်။ ရင်ထဲမှာ နင့်ပြီး အောင့်နေအောင်ကို ခံစားရတယ်။ တကယ့်ကိုပဲ ဒါတွေကြောင့်ပဲ ကျမက အိပ်မက်တွေပဲ မက်နေခဲ့တာလား မသိဘူး။
အဲဒီ ၂၀၀၈ က စလိုက်တဲ့ ကိစ္စလေးကနေ အားတက်သွားတယ်။ နောက် ၂၀၀၉ မှာ အွန်လိုင်းကနေ ABက လူတယောက်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရလိုက်တယ်။ အဲဒီကနေ အချိတ်အဆက်တွေ ရှာရင်း၊ အချက်အလက်တွေရှာရင်း မတရားတာတွေကို လက်မခံနိုင်တဲ့ သူတွေက ကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။
(မိတ်ဆွေတို့ရေ ....ဒီမှာ ရပ်လိုက်ရမလား၊ ဆက်ရေးရမလား ဆိုတာ အကြံပေးကြပါဦး၊ ကျမကို အပိုင်းလိုက်ရေးပြီး လုပ်စားနေတယ်လို့ ပြောဆိုကြတာတွေ ရှိနေတယ်၊ အခု ရေးနေတဲ့ ABSDF နှင်ပတ်သတ်သော စာတွေအတွက် ကျမ တပြားမှ မရပါ၊ မရတဲ့ အပြင် အချိန်ပေးရ၊ ပြောဆိုခံရခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရတာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ကျေနပ်စွာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်၊ မနန်းအောင်ထွေးကြည်အကြောင်း ဆက်ရေးစေချင်ရင် ဆက်ရေးပါမယ်၊ ရပ်ပြီး အခြား တယောက်အကြောင်း ရေးစေချင်ရင် ရေးပါမယ်၊ ကျမစာတွေကို ဖတ်နေကြတဲ့ အများရဲ့ ဆန္ဒကို ကျမ လေးစားလိုက်နာပါမယ်ရှင်)
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, Htay Tint and 65 others like this.
Nay Min ဆက်ရေးရန် ထောက်ခံပါတယ် အစ်မ
January9at 4:20am · Like · 12
Konyein Maung အမရေ အရိုးတွံသံတွေကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ လုပ်နေသူတွေကတော့ အမျိုးမျိုးဝေဘန်နေမှာပဲ သူတို့က အခု ပြည်တွင်း စားပေါက်ထွင်နေတဲ့အချိန်လေ၊ စာနယ်ဇင်းတွေကြောင့် သူတို့ဂွင်ကို ပြည်သူတွေက သိသွားတော့ အတော်အကျပ်ရိုက်နေကြပြီ၊ မိုးသီးဆို အခု သူ့ဝတ်ဆိုဒ်ကနေ အစိုးရပုတ်ခပ်တာမျိုး သွေးထိုးမြောက်ပင့် တာမျိုးတွေနဲ့ မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားတဲ့ ဘီဘူးမျက်နှာတွေ ပြန်ပေါ်နေပြီ၊ သမိုင်းဖျောက်ချင်သူတွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ မီဒီယာသမားရှုထောင့်မှ မှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်
January9at 4:22am · Like · 12
May Thingyan Hein ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျန်မိတ်ဆွေများရဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီး သဘောထား မှတ်ချက်ပေးကြပါရှင်။
January9at 4:25am · Like · 3
Pyaw Gyi ဆက်ရေးပါ
January9at 4:26am · Like · 4
Maung Wuntha မေရေ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ။ ဘယ်သူတွေက ပြောလဲ လုပ်စားနေတယ်လို့။ ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့။
January9at 4:33am · Like · 22
Thant Zin Naing အမ..အမှန်အ၇ားကိုချစ်မြတ်နိုး၇င်ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်ေ၇းပါ
January9at 4:33am · Like · 4
May Thingyan Hein ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ၊ ဆရာတို့ အားပေးချီးမြှင့်တဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရေးပါမယ် ဆရာ။ ဆရာလည်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါနော်။
January9at 4:34am · Like · 6
Maungmaung Skw သာယာဝတီမှာ သံချောင်းရှိပါတယ်။
သံချောင်းနဲ့အတူ ဗိုလ်မှူးမြင့်ဦးလဲရှိနေပါ တယ်။ဗိုလ်မှူးမြင့်ဦးဟာ မန္တလေး
January9at 4:36am via mobile · Like · 19
January9at 4:43am · Like · 5
Oo Thar ရုပ်ရှင်ကားတွေ စတီထွင်တော့ အမေရိကန်သမိုင်းကို ပထမဆုံးရိုက်တယ်။ လာကြည့်တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ( နာမည်မေ့ နေလို့) ကြီးက အမေရိကန်သမိုင်းကို လျှပ်ပျက်သလို မှတ်တမ်းတင်တာပါပဲလို့ ပြောခဲ့တယ်။ အဲလိုပဲ မမေသင်္ကြဟိန်ရယ်........သွေးနဲ့ရေးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားသမိုင်း ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ရတာ နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်တော့ ကြီးမားတဲ့ တန်ဘိုးပါပဲ။ ဆက်ရေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
January9at 4:46am · Like · 7
Phyo Mg Mg Win ဆက်ရေးပေးပါ နောင်လာနောက်သား
တွေ အတွက် ပညာ ရ သလို သမိုင်း ကို လည်း သိ ခွင့် ရ ပါ တယ် တော် လှန် ရေး တော် လှန်ရေး နဲ့ ဒီ အထဲ က လူ မ သိ သူ မသိ သူရဲကောင်းတွေ ရှိ နေတယ်ဆို တာ သိသင့်သလို ဂုဏ် ယူ သင့်အောင် လို့ ပါ အစ် မ
January9at 4:46am via mobile · Like · 9
Myo Zar အစ်မ ညီမ အစ်မရေးတဲ့ မြောက်ပိုင်းအကြောင်းတော်တော်များများဖတ်ပြီးပြီ၊ ဒါပေမဲ့ အချို့အကြောင်းအရာတွေ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်၊ လွတ်သွားတဲ့ 55 ယောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်သလဲ အစ်မသိသလောက်ပြောပြပေးပါလား...
January9at 4:51am · Like · 5
UZa Wana ခနိုးခနဲ့ ၊ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း
ရှေ့ရှုနှင်လော့ ဆိုတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးမစာကို မမေ အမြဲနှလုံးသွင်းပါ
January9at 5:02am · Like · 13
Kyaw Kyaw Naing ဆက်ရေးပေးပါဦးအစ်မ ဇာတ်လမ်းကမပြီးသေးပါဘူး နောက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုစာအုပ်တစ်အုပ်အနေနဲ့ဖတ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
January9at 5:06am via mobile · Like · 5
Thauk Kyar Kyal ဆက် ရေး ပြိး ဆုံးအောင် လုပ် ပေး လိုက် ပါ ..။ သေတဲ့ သူတွေအတွက် ....။
January9at 5:14am · Edited · Like · 3
Htar Htar Lwin အချို့က လုပ်စားနေတယ် သတင်းရောင်းစားနေတယ်လို့ပြောကြတယ်...သတင်းထောက်က သတင်းရေးတယ် သတင်းဖတ်ချင်သူက သတင်းပါတဲ့ ဂျာနယ်ကိုငွေပေးပြီးဝယ်ဖတ်တယ် အဲဒါဘာဖြစ်လဲ...လုပ်စားတော့ရောဘာဖြစ်လည်း...တောင်းစားတာမှမဟုတ်တာ...ရောင်းစားတော့ရောဘာဖြစ်လည်း...ဓါးပြတိုက်တာမှမဟုတ်တာ....See More
January9at 5:16am · Like · 12
D Day Ang “ ခနိုးခနဲ့၊ ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း၊ မရွဲ့မစောင်း၊ ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို၊ စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ်၊ ရှေ့ရှုနှင်လော့ ” ဆိုတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဆုံးမစာကို အမ အမြဲနှလုံးသွင်းနိုင်ပါစေ။ (ဆရာတော် U Za Wa Na ၏ Comment ကို လေးစားစွာ ကော်ပီကူးယူပြီး အားပေးပါသည်)။
January9at 5:18am · Like · 4
Su Mon Htwe ဆက်ရေးပေးပါ
January9at 5:19am via mobile · Like · 3
Aretouu Aretou အားပေးပါတယ် အမှန်တ၇ားအတွက်ဘဲ
January9at 5:20am · Like · 3
Min Thu Kyaw ဆက်ရေးပေးပါဦးဗျာ . . သမိုင်းအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးပါဗျာ . . နောင်လာနောက်သားတွေထံကို သမိုင်းအမှန်တွေရောက်သွားဖို့ အစ်မတို့ပဲ ကူညီပေးပါဗျာ . . .
January9at 5:23am · Like · 3
Roger Unger ဆက်ရေးပါ အစ်မ၊ သမိုင်းက အမှန်တရားပဲထောက်ခံတာပါ။
ကျန်တာတွေဂရုမစိုက်ပါနဲ့၊ အချိန်တန်ရင် မောသွားပါလိမ့်မယ်။
January9at 5:25am via mobile · Like · 3
Min Thu Kyaw အစ်မရေ . . နောင်လနောက်သားတွေအတွက် သမိုင်းအမှန်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ပါခင်ဗျာ . .
January9at 5:26am · Edited · Like · 3
U Tin Shwe ဆက်ရေးပါ၊စာအုပ်ပါထုတ်လို့ ရရင်ထုတ်ပေးပါ
January9at 5:25am · Like · 3
Robert Hla Tun ဆက်ရေးပါ အားပေးပါတယ်
January9at 5:27am · Like · 2
U Nyunt Win ဆက်ရေးစေချင်ပါတယ်
January9at 5:28am · Like · 3
Shwe Zin Mon Aung ဆက်ရေးပါအမရယ် .... အမစာကိုဖတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပါ..ဒီလူတွေကနေတဆင့် ဒီစကားတွေထပ်ဆင့်ပျံ့ပွားပါစေ ...
January9at 5:29am · Like · 4
Phayphay Maymay ဆက်ရေးပါ အပိုင်းလိုက်ကို စောင့်ပြီးဖတ်နေရတာ
Ko Ko Naing စာအုပ်ထုတ်ဖို့လည်း စဉ်းစားပါ
January9at 5:40am · Like · 3
Htay Htay San ဆက်ရေးပါ သေသူတွေရဲ့ အရိုးတွန်တာကို တွန်ခွင့်ပြုသောအနေနဲ့ ကျေးဇူးပြု၍ဆက်ရေးပါ
January9at 5:40am via mobile · Like · 4
Min Thant Aung ဆက်ရေးပါခင်ဗျာ။
January9at 5:44am · Like · 3
Aung San Myint နန်းအောင်ထွေးကြည်(aka) မေသင်္ကြန်ဟိန်,
January9at 5:47am via mobile · Like · 3
Ni Lar ဒီစာတွေဟာမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက၈၈ကျောင်းသားတွေရဲ့ သမိုင်း..ဆက်ရးသင့် တယ်..ကြိုဆိုမျော်လင့် နေပါတယ်
January9at 5:50am · Like · 3
Heinminthu Thu ဆက်ရေးစေချင်ပါတယ်။
January9at 5:51am via mobile · Like · 3
Kyaw Mar Lar Please to be continued!
January9at 6:29am via mobile · Like · 1
Ahlaba Dalaba ဆက်ရေးပါ！！！！！See Translation
January9at 6:33am · Like · 1
အဆိပ် သင့်သူ ဝေလဲဝေပါ ပေးလဲပေးပါ အသိထားတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့
PLlay Lay sat loat parama yae
January9at 6:53am · Like · 1
Kevin Huang အမှန်တရား နဲ့ တရားမျှတမူ့ အတွက် တောင်းဆိုပါရစေ။ ဆက်ရေးပေးပါ။
January9at 7:02am · Like · 1
Sein Than please,to be continuous, i support you always,
January9at 7:19am · Like · 1
Mee Nge Hnin never never never give up!!!!!!!
January9at 7:27am · Like · 1
Mary Wiliam လုံးချင်းစာအုပ်ထုတ်ပေးပါ။လုပ်စားတော့ဘာဖြစ်လဲ။ခိုးတာမှမဟုတ်တာ။
January9at 8:00am · Like · 1
Bosi Thu ဆက်ရေးပါ..ဒါမှတမလွန်ကနေအမှန်တရားအတွက်စောင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်
January9at 8:29am via mobile · Like · 2
Bosi Thu အမှန်တရားဟာပေါ်လာမှာ
January9at 8:30am via mobile · Like · 1
Boke Sweet စာအုပ်ထုတ်စေချင်ပါတယ်။
January9at 10:42am via mobile · Like · 1
Ko Lay မှတ်ချက်တွေအားလုံးကို ဖတ်ကြည့်တယ်။ တခုမှကန့်ကွက်တာမပါဘူး။ အချို့မှတ်ချက်တွေဟာ ဥာဏ်ပညာနဲ့ယှဉ်ပြီး နှလုံးသားနဲ့ ရေးထားကြတာကို ခံစားလို့ရနိုင်တယ်။ သူယုတ်မာ ၁၀၀၀ ကဲ့ရဲ့တာထက် သူတော်ကောင်းတယောက် ချီးမွန်းတာက ပိုလို့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ မနန်းအောင်ထွေးကြည် ပြည်တွင်းရောက်နေတုန်း ထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးစေလိုပါတယ်။
January9at 1:01pm · Like · 2
Nwe Khine Please do carry on
January9at 2:02pm · Like · 2
Kyaw Moe Naing ဆက်ရေးပါဗျာ
January9at 5:17pm · Like · 1
Si Thu ဆက်ရေးပါ ထောက်ခံပါတယ် အစ်မ
January9at 6:59pm · Like · 1
Kyaw Kyaw Htin Aung don't worry...go ahead.
January9at 7:16pm · Like · 1
Wunna Winthu Are you kidding? Your writing is awesome! You can write whichever article and break them down as much as you like. We will wait and read!
January9at 7:44pm · Like
Re Searcher အမရေ... အပိုင်း (၂၆) ကို မျှော်နေတယ်..
January9at 8:42pm · Like
Tin Htoon Win ရေးစရာရှိရင် ဆက်ရေးပေါ့ဗျာ၊ ဖတ်စရာ၇ှိရင်လဲဖတ်တာပေါ့။ မမှန်ဖူးထင်လို့ ကန့် ကွက်ခံရရင်လည်း ဖတ်စရာထပ်တိုးလာမှာပေါ့။
January9at 10:17pm · Like
Kung Lay အမ မေ ရေ ကျွန်တော် ဆို နယ်ပြန်ရင် အမ ရေးတဲ့ အကြောင်းတေံပြော ပြရတယ် ။ အမ တိုနဲ့ အသက်တူတွေဆို မသိကြဘူး။ အဲးဒါကြောင့် အပိုင်းလိုက်print ထုတ်ပြီးနယ် ကို ပို့ ပေးရတယ်။ ရေးပါလို့ မပြောရက်ပါ ဘူး အမ မေရေ.........မျော်တော့နေမယ်
January9at 10:29pm · Like · 1
Yin Mya အမရေဆက်ရေးပေးပါရှင့်၊တမလွန်ကအကိုတွေအမတွေကမှာခဲ့တယ်လေ။သမိုင်းအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကိုလေ
January9at 10:34pm · Like · 2
UThein Win Please continue writing........PLEASE.........
January9at 10:39pm · Like · 1
Aungmyint Ko keep on writing!
January 10 at 7:01am · Like
Hla Myo သင်္ကြန် သီချင်းအလိုက်လေးနဲ့တောင်းဆိုပါရစေ... ( ရေးမယ်ဆို ဖတ်ပါတယ် စောင့်မျော်နေလျှက်ကွယ် ...ကျမ်းမာရင်ရေးပါကွယ် အပိုင်း ၂၆ လေးရယ် ..)
January 10 at 9:37am · Like
Nyaung Oo Phee အားပေးနေပါတယ်
January 11 at 8:27am via mobile · Like
Nyaung Oo Phee အမ နန်းအောင်ထွေးကြည် ကြိုးစားတာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကို ရပ်တည်တာ....မိန်းမသား ဖြစ်ပြီး အထောက်အပံ့ မယူပဲ.....ကိုယ့်အားကို ကိုးတာကြည့် အရမ်းလေးစားပါတယ်...ဂုဏ်ယူပါတယ်.....တချို့များဆို ယောက်ျား ရင့်မာကြီးတွေ လုပ်ပြီး အထောက်အပံ့တွေ ယူ....အားအားယားယား အွန်လိုင်းပေါ်တက် နိုင်ငံရေး လုပ်နေလိုက်တာများ....အားတယ်လို့ ကို မရှိဘူး......ဒေါ်စုတောင် သူတို့လောက် ပညာ မတတ် စိတ်ထား မကောင်း အမြော်အမြင် မရှိသလိုပုံနဲ့....အပြစ်အမျိုးမျိုး တင်နေလိုက်တာများဗျာ.......ရှက်စရာပါ
January 11 at 8:34am via mobile · Like
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 10:05 PM